Jabuuti iyo maamulka Somaliland oo heshiis ka gaaray adkeynta amaanka xadka labada dhinac – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jabuuti iyo maamulka Somaliland oo heshiis ka gaaray adkeynta amaanka xadka labada dhinac
A warsame 5 April 2014 4 April 2019
Lowyacadde – Mareeg.com: Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa heshiis iskaashi la saxiixatay maamulka Somailland, kaasoo ku saabsan sidii ay labada dhinac isaga kaashan lahaayeen ka hortagga isku gudbinta maandooriyaha, tahriibka iyo kooxaha argagaxiada ah.
Xubno ka kala socda Jabuuti iyo Somaliland ayaa heshiiskan saxiixday magaalada Lowya-cadde, sida ay ay baahisay wakaaladda wararka dalka Jabuuti. Jabuuti oo ciidamo dagaallama u dirtay Soomaaliya, islamarkaana Alshabaab u hanjabeen ayaa cabsi ka qabta in kooxo amaankeeda khatar ku ah ka gudbaan xuduudka.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland, Cali Maxamed Waran-cadde ayaa dhanka Somaliland u saxiixay heshiiska, iyadoo dhinaca xukuumadda Jabuutina uu heshiiskaan u saxiixay wasiirkooda arrimaha gudaha, Xasan Cumar Maxamed.
Labada dhinac ayaa qoraya in la dhiso guddi wadajir ah oo la socda dhaqan-gelinta go’aannada heshiiska, kaasoo ah mid xoojinaya iskaashiga arrimaha ammaanka iyo la-dagaallanka argagixisannimada.
Waxaa sidoo kale ay labada dhinac iska kaashan doonaan ka-hortagga tahriibka, iyadoo ganacsigana labada dhinacna laga dhigi doono mid xooggan.
Wasiir Cali Maxamed Waran Cade oo warbaahinta ugu warmaayey qolka nashada ee Madaarka Hargeysa kadib markii uu kazoo laabtay Jabuuti ayaa waxaa uu sheegay iney hawlihii shaqo ee ay dalka Jabuuti ay u tageen ay isla so afgarteen Madaxda dawladaasi oo ay si wada jira oo walaal tinimo ah ay iskaga kaashan doonaan wixii dano ah ee ay wadaagaan labada dawladood, waxaa uu sida oo kale uu sheegay in uu madaxweynaha dawlada jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ay gaadhsiiyeen fariin aad muhiim u ahayd oo ay ka sideen Madaxweynaha Somaliland.
“Runtii waxaan halkan jecel nahay inaan uga mahad celino dawlada Jabuuti oo aanu mudo todobaad ah aanu imika ku maqnayn sida wanaagsan ee naloo soo dhaweeyey, runtii waxaanu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele aanu gaadhsiinay fariin aanu ka sidnay madaxweynaha Somaliland oo runtii nuxur badan xambaarsanayd, arimo badan oo labad dawladood ka dhaxeeyana waxaanu runtii aanu ku dadaalnay in si dhaw oo walaal tinimo ah laysaga kaashado waxaan runtii ay ku soo dhamaatay is afgarad qiima leh oo wanaagasan” ayuu yiri Wasiir Cali Maxmed Waran Cade.
“Ujeeddada wadahadallada waa in la helo fikrado wadaag ah oo la doonayo in lagu helo qaabab lagu horumarin karo dadaallo looga hortagayo, tahriibka, waxyaabaha maanka dooriya iyo argagaxisada, waana kaas iskaashiga aan kala saxiixannay,” ayuu yiri Waran-cadde oo la hadlay warbaahinta.
Xadka u dhaxeeya Jabuuti iyo maamulka Somaliland ayaa waxaa la sheegaa iney aad uga gudbaan dadka tahriibka ah ee doonaya iney gaaraan dalka Yemen si ay uga sii gudbnaa dalka Sacuudi Carabiya. Sidoo kale, waxaa xadka labada dhinaca la isga gudbiyaa waxyaabo kotorobaan ah oo labada dhinac doonayaan iney ka hortagaan.
Baarlamanka Jarmalka oo ogolaaday in tababarayaal ciidan loo diro Soomaaliya
Xildhibaan ka baxay baarlamanka Soomaaliya oo booxkiisa loo dhaariyey xildhibaan kale